फोनमा युवतीको अ’श्ली’ल फोटो पठाए, फोटो डिलिट गर्ने बहानामा बोलाएर गरे यस्तो अनैतिक काम – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/फोनमा युवतीको अ’श्ली’ल फोटो पठाए, फोटो डिलिट गर्ने बहानामा बोलाएर गरे यस्तो अनैतिक काम
फोनमा युवतीको अ’श्ली’ल फोटो पठाए, फोटो डिलिट गर्ने बहानामा बोलाएर गरे यस्तो अनैतिक काम
सामाजिक सञ्जाल मानिसहरुको विचलित मानसिकता ब्यक्त गर्ने थलो पनि भएको छ । भारतमा यस्तै एक घटना भएको छ । भारतको पञ्जावमा एक ब्यक्तिले युवतीको तस्वीर फेसबुकबाट निकाल्छन्, त्यसलाई फोटोसप गरेर अ’श्ली’ल बनाउँछन् र युवतीको म्यासेन्जरमा पठाउँछन् ।
आफ्नो यस्तो तस्वीर देखेर युुवतीको सा’तो जान्छ । उनी ती युवकलाई फोटो डिलिट गर्न भन्छिन्, युवकले भेटौं भन्छन्, उनी भेट्न जान्छिन् । त्यहाँ उनले युवतीमाथि अनैतिक कार्य गर्छन् । र पैसाको माग गर्छन् । पैसा नदिए फोटो भाइरल बनाइदिने बताउँछन् ।
यस्तो गर्ने युवकलाई साहिलदीप सिंह भनेर चिनाइएको छ । त्यस केटाले ममदोतको फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको थियो जुन उनले स्वीकार गरिनन् । त्यसको रिस फेर्न केटोले यस्तो गरेको युवतीको आरोप छ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
युवकले फोटो मे’टाउने आश्वासन दिई उनलाई फिरोजपुर शहरको नामदेव चौकमा बोलाए र गाडीमा लिएर उनलाई मोगा रोडतर्फ लगे । र एकान्त जंगलमा अनैतिक काम गरे ।
अमर उजालामा छापिएको समाचार अनुसार, युवतीले त्यसपछि पुलिस स्टेशनमा उजुरी गरिन् । प्रहरीले साहिलदीप विरुद्ध मु द्दा दर्ता गरेको छ । घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका सब इन्स्पेक्टर जगदीप सिंहका अनुसार केटाको खोजी भइरहेको छ र छिट्टै पक्राउ गरिनेछ ।
कोरोना पुष्टि पछि होमआइसोलेशन बस्न घर जाँदै थिए, दुर्घ`टनामा परी बाटोमै मृ`त्यु !
आन्तरिक उडान खुलाउने र लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारको तयारी
प्रत्यक्ष दर्शिको बयाननै आङ जिरिङ पार्ने, बचाउ बचाउ भनेको सुनियो तर जान सकिएन (भिडियो)
भोलि बाट फेरी लकडाउन हुदैछ? बोले ट्राफिक प्रहरी प्रमुख दशैंमा बन्दै छ कडा नियम (भिडियो कुराकानी)
दशैंमा घर जाँदै हुनु हुन्छ ? एकपटक पढ्नुहोस्, स्वस्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो सुचना !